crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> April | 2022 | HimiloNetwork
Ciidsiinta Carruurta Naafada iyo Danyarta
Himilo April 30, 2022	Leave a comment 104 Views
MUQDISHO (HN) — Saacado tirsamaya ayaa ka dhiman dhalashada Ciidul-fitriga. Carruurta aad ujeedaanna waxay ku jiraan diyaargarowgii kama dambeysta ahaa oo ay kaga qeyb noqonayaan farxadda iyo damaashaadka maalinta weyn. Mahad waxay uga celinayaan kaalmada samafalayaal iyo aqoonyahanno isku tagay kuwaas oo sannadkii labaad suuragalinaya inay ciidsiiyaan ilmaha ay dhaleen qoysaska naafada ah ee qaarkood ku nool xerooyinka barakacayaasha. Mohamed ...
Himilo April 28, 2022	Leave a comment 39 Views
MUQDISHO (HN) — Ma ahan shaqaale maqaayadeed. Mana joogaan goob xaflad ah. Waa da’yar samafalayaal ah oo sannadkii 4aad oo xiriir ah u midoobaya inay gargaar la gaaraan dadka barakacayaasha ah ee ku nool kaamaka magaalada si ay ugu afuraan. Dalmar Caddow Maalin oo aan heysan nimcadda araggana wuxuu ka qeyb ka ahaa ol’olaha afuri walaalkaaga taniyo markuu soo bilowday. ...
Himilo April 27, 2022	Leave a comment 117 Views
MUQDISHO (HN) — Rumeyso ama diid. Kawaanlenimadu waa shaqo aalaaba lala xiriiriyo ragga. Balse qofka aad ujeedaan ma ahan nin. Waa gabar. Magaceeduna waa Layla Ibrahim Cusmaan. Ma ahan sannad iyo laba sannadood inta ay halkan ka shaqeyso. Waa in ka badan 10 sanno. Marka ugu horreysa oo aad aragto, way adag tahay inaad rumeysato inay tahay qof dumar ah. ...
Masjidka London oo maalin walba ‘Quudinaya’ 500 oo Danyar ah.
Himilo April 26, 2022	Leave a comment 33 Views
MUQDISHO (HN) — Soo nooleynta dhaqankii ahaa wada-afurka bulshada oo aan labadii sannadood ee lasoo dhaafay la qaban, mid kamid ah masaajidda ugu waaweyn qaaradda Yurub wuxuu maalinle u quudinaya ku dhawaad 500 oo qof goor walba oo la gaaro afurka. Masjidka East London wuxuu cunnooyin bisil gaarsiiyaa nus kumaad dad ah oo kala diimo ah maalin walba, sida laga soo ...
Himilo April 26, 2022	Leave a comment 65 Views
MUQDISHO (HN) — In ka badan 14 milyan ayaa booqday Masjidka Nabiga NNKH ee magaalada Madiina taniyo markii ay dhalatay bisha Soonqaad taas oo dhigaysa rikoor cusub taniyo markii la qaaday xayiraadda Covid-19. Sida laga soo xigtay Saudi Gazette, Madaxa Umuuraha Labada Masaajid – Makka iyo Madiina – ayaa sheegay in Masjidka Nabiga ay soo booqdeen tiro gaaraysa 14,772.46 Warbixinta ...
Himilo April 24, 2022	Leave a comment 70 Views
MUQDISHO (HN) — Zainab Khan, oo ah ardayad Muslimad ah oo 11 jir ah, ayaa heshay maryo hadyado ah oo lagu mariimay farriimaha dhalashada bisha Soonqaad markii ugu horreysay nolosheeda wax-barasho ee dugsiga British Columbia. “Waxaa la badbatay farxad iyo reynreyn,” ayay tiri. “Waa nasiib inaan kamid noqdo iskuulkaygan qiimaha badan.” Laakiin waaya’aragnimada Khan ay ka heshay halkan aad bay ...
Himilo April 23, 2022	Leave a comment 109 Views
MUQDISHO (HN) — Laga yaabee inuusan u dhigmin baaxadda labada garoon ee ugu waaweyn caasimadda Muqdisho. Hayeeshe salaxani wali waa midka ugu weyn salaxyada magaalada oo galab walba inta lagu guda-jiro bisha Soonqaad ay ku dheelaan kooxo kala heerar ah oo ku tartamaya koobka Ramadaanka. Galabta wuxuu kulankani dhex marayaa labo koox oo kala ah FC Khaliifa iyo Gool. Waana ...
La kulan – Da’yarta Uursamida ku calool-fiyow.
Himilo April 21, 2022	Leave a comment 119 Views
MUQDISHO (HN) — Markii ugu horreysay waxaan la fariisanay da’yar ku jirta wax-barashada jamacadda kuwaas oo hadda kahor aan codbaahiyaha kasii deynin farriin UURSAMO ah. Mohamed Cusmaan iyo Abdullahi Xasan Xaashi weligood kuma qaadan muddo dheer inay adeegsadaan awoodda wax cafinta – waxayna hadiyo jeer u ahayd astaan ay kaga hortagaan is-naceybka iyo kala tagga. “Wallaahi maba aqaan sabab aan ...
Himilo April 21, 2022	Leave a comment 125 Views
MUQDISHO (HN) — Daqiiqado un kaddib markii uu suxuurtay, Hourari Benkada wuxuu usii degdegayay jarmaadda shaqadiisa. Isaga oo ku socda jid kamid ah jidadka ay rag hubeysan fureen xabado iyaga oo qarxinaya bambada nuuca qaacda. Da’yarkan Muslimka ah oo asal ahaan kasoo jeeda dalka Algeria-na wuxuu ka dhaawacmay jilibka xilli uu gabaad siinayay haweeney xaamilo ah oo gadaashiisa ku jirtay. ...
Cunug Lix lugood ku dhashay!